Beethoven Elementary School | Boston School Finder
BPS/DegmadaK1 - 3aad
5125 Washington Street, West Roxbury
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-3:10pm
Dugsiga Kahor 7:00am-8:15am
Dugsiga Kadib 3:10pm-5:30pm
Lambarka Taleefanka 617-635-8149
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad
Beethoven waa jawi dugsi soo dhaweyn u leh labadaba ardaydeena iyo qoysaskooda. Bulshadeena waxay gaartay meel dhaafsan fasalka, oo waxaan ku dadaalnaa inay ardaydeena ka fakaraan caalamka ku haraareysan. Intaan kujirno dugsiga, waxaan dadaal dheeri ah samaynaa maalin kasta waxaana ”Wax kubaranaa farxad!”
Shaybaar kumbuyuutarada loogu talagalay oo cusub.
Barnaamijka muhiimad siinta qalabka muusiga.
Barnaamijka akhrinta qaranka guriga ee la aqoonsanyahay.
`Takhasuska kumbiyuutarada, muusiga, waxbarashada jirka, farshaxanka iyo sayniska.
Tabarucayaasha waalidka aad u firfircoon.
Jaheeyayaasha iyo macalimiinta ardayda oo kasocda Boston College iyo jaamacadaha kale.
Shabakada taageerada ardaydeena ee dhibaatooyinka qabo.
Dhismo firfircoon, nadiif ah oo leh deyr qaabeysan iyo garoon weyn oo qurux badan.
Takhasuslayaal kudheereeya Farshaxanka, muusiga, tignooloojiyada, iyo waxbarashada jirka.
Barnaamijka dugsiga kahor laga bilaabo 7:00 ilaa 8:15
Barnaamijka dugsiga kadib, 3:10 ilaa 5:30
Saraawiisha Khaki ama shaararka leh funaanadaha Buluug Xigeen ah
Waxaa dugsigu balan qaadayaa melayn lasiiyo ardayda dhigta fasalada 3 oo ay kahelayaan dugsiga Ohrenberger.
Barashada Luuqada Ingiriiska - Luuqado Badan
window.charts.studentDiversity.data = [27.80, 2.50, 25.90, 3.40, , , 40.40]
window.charts.teacherDiversity.data = [0.90, , 3.90, , , , 14.90]
21 oo kamid ah22